ကြည့်ရှုသူပြproblemနာကို Final Cut Pro X 10.3 စပိန်ဘာသာဖြင့် | ငါက Mac ပါ
ကြည့်ရှုသူပြ10.3နာကို Final Cut Pro X XNUMX စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖြေရှင်းသည်
နောက်ဆုံး Cut Pro X ၏ဗားရှင်း ၁၀.၃ ကို Macbook Pro 10.3 နှင့်အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးသော့ချက်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ဤမူကွဲအသစ်သည် တစ်ခုလုံးကို interface ကိုများအတွက်အဓိကပြောင်းလဲမှု။ အခုတော့ လိုင်းများဖြောင့်ကြသည် နှင့်အလွန်သန့်စင်ပြီးလက်ရှိထုတ်ကုန်တစ်ခုအရေးကြီးသောအာရုံကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ လျှောက်လွှာဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပြီးထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိစေဘဲပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလုပ်ငန်းခွင်allowsရိယာကိုခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အတွက်များ၏လျော့ပြေကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ ဗားရှင်း ၁၀.၀ ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစတင်၍ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် FCP X အားကြိုးစားမှုအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်၊ အကြောင်းမှာပရိုဂရမ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်သောအမှတ်အသားကိုချိတ်ဆွဲထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Key Bar မှာ Touch Bar ရဲ့ဒီပရိုဂရမ်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပံ့ပိုးမှုပေးတာကိုတွေ့ရပြီးတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးတယ်။
သို့သော်ယင်း၏ဘဝလတွင်ဤဗားရှင်းသစ်အတွက်အရာရာတိုင်းသည်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လျင်မြန်စွာ စပိန်ဘာသာဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်ပြသနာများကိုကြည့်ရှုသူကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုသတင်းပို့ကြသည် (ဗဟုသုတမရှိသောသူများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဗွီဒီယိုများကိုတင်ပြသည်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည့် နေရာမှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမရှိပါ။ )
ပရိုဂရမ်၏စပိန်ဘာသာပြန်ကျမ်းတွင်သာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းပထမယာယီဖြေရှင်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြီးအမှားပြင်ဆင်ချက်အမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာသာစကားပြောင်းခြင်းသည်ခေတ္တအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတောင်မှအနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာ, အသုံးပြုသူ Javier Tamames placeholder ပုံရိပ် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဖြေတစ်ခုကိုဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည် နောက်ဆုံး။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
Final Cut Pro X 10.3 ကို hard drive ပေါ်တွင်ရှာပြီး right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "အထုပ်အကြောင်းအရာပြရန်".
"FFPlayerVideoModule.nib" ဖိုင်ကိုရှာပြီး၎င်းကိုရွေးပြီး clipboard သို့ကူးရန် "CMD + C" ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် /Contents/Frameworks/Flexo.framework/Resources/es.lproj ဖိုင်တွဲသို့သွားသည်။
paste လုပ်ရန် "CMD + V" ကိုနှိပ်ပါ။ ကျနော်တို့အစားထိုးသို့မဟုတ် overwrite ကို select လုပ်ပါနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Tamames ကိုယ်တိုင်ကဤအတိုင်းအတာသည်လုံခြုံမှုရှိ၊ မရှိ၊ အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိဟုပြောရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဆောင်ရွက်ရန်မှာသင်၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ FCP X 10.3.1 ၏နောက် version သည်ထွက်သင့်ပြီးပြသနာကိုကြည့်ရှုသူနှင့်ဖြေရှင်းသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ကြည့်ရှုသူပြ10.3နာကို Final Cut Pro X XNUMX စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖြေရှင်းသည်
ကောင်းတယ် !!!!! ဖြေရှင်းရသည့်ပြveryနာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sandy, ယခုအချိန်တွင်သင်သည်ဤအမှားကိုအခြားသူများအကြားပြေလည်စေသော version 10.3.1 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ။
ယခုစတိဗ်ဂျော့ဘ်နှင့် Pixar အကြားဇာတ်လမ်းကို iBooks Store တွင်ဖော်ပြထားသည်
LG UltraFine 5K ၏ပထမဆုံးထုတ်ယူခြင်း